Top Five Yangu Mubhama 'Seesaw' - Tudzaa | Home
Tudzaa May 27, 2021 139
Tudzaa Jun 21, 2021 06:47 288
Splits Loui akabura album nyowani rinonzi Seesaw achimiririra ghetto rake Rusape. Rine ma trcks 11 & rine ma features evaimbi ava JoJo,Vickiey na SoulDeep.
Ndakuchitaura top 5 yangu yemubhama iri..
1) Seesaw aka ka fav ndafarira kuflowa kwaanga achiita ndo hip-hop iyi. Yaa life inoita ma ups & down shuwa. Munhu akabika beat reapa aiziva zvaaita akarigona.
2) Kurauone aka kanobata bata kanoda kuti munhu ukanzwe wakadzikamisa hana. Ndanga ndichiita kunge ndikunzwa a sad story ndobva ndatanga kurova ka visualization kenyaya yacho mupfungwa. Harsh reality chaiyo ikuitika yanga ichiimbwa apa. Zvoratidza kuti muimbi akagona apa.
3) Ikoko aka ka song kerudo.Vaye vanofarira zverudo ndoka song kenyu aka. Apa muimbi akuda kutera mudiwa wake kwaari kure ikoko. Voice remuimbi ranga richifamba zvinyoro nyoro neka slow pace. Yaa rnb inodakadza kunzwa ndanakirwa.
4) Sango aka kari bho Splits Loui aka feature Vickiey pa trk iri. Ka trk aka kanoita kurovesa madhanzi nako. Yooo musikana uyo anonzi Vickiey ane voice. Ndichatoita research ndimbonzwa ma projects ake ekare nemanyowani musikana uyu l hope kuti anenge aripo. Anyway back to nyaya ndanga ndarohwa neka excitement ndikamborasa nyaya mbichana.l hope kuti pa future vachaita mamwe ma collabs.
5) Wandigona aka kaka feature SoulDeep. Ka house kanonakidza.
Vanoda kuzonzwa full bhama iri munoribata pa links ari pazasi apa.
Apple : https://cutt.ly/Xn0WodQ
Amazon : https://cutt.ly/En0WhXw
Spotify : https://cutt.ly/nn0WEwt
Kana kuritenga via Ecocash pama details akubuda pamufananidzo uri pazasi apa.
Chikwata 'The Unveiled' Chopinda Pamamonya
Tudzaa Feb 25, 2021 314
Tudzaa Apr 16, 2021 222
New Vidz : Van Choga - Haamuke
Tudzaa May 21, 2021 134
Tudzaa Jun 14, 2021 124
Tudzaa Jun 28, 2021 78
Tudzaa Apr 15, 2021 197
Jason Drops New Video
Tudzaa Mar 27, 2021 416
Nedo drops a new video
Tudzaa Mar 19, 2021 272
Tudzaa May 28, 2021 250
Tudzaa Jun 21, 2021 130